Ayisekho into yokwehla uye kwi-iOS 13.7 | IPhone iindaba
Akusekho kwimeko yokwehla uye kwi-iOS 13.7
Xa iApple uhlaziyo olutsha lwenkqubo yokusebenza, okwethutyana, ivumela abasebenzisi ukuba bathothule, babuyele kuhlobo lwangaphambili, ixesha elimiselwe malunga neeveki ezimbini, nangona ngamanye amaxesha, oku kuncitshiswa kwiveki okanye kwiintsuku.
Ngokukhutshwa kwe-iOS 14, kwi-Apple Bavale nje ucango lokuba babuyele kwi-iOS 13.7, Inguqulelo yamvanje ekhutshwe yiApple yezixhobo ezilawulwa yi-iOS kunye ne-iPadOS, ke ukuba unengxaki nge-iOS 14, awungekhe ubuye umva.
Ukusebenza kunye nokusebenza kwe-iOS 14 kubonisile ukusukela kwi-betas yayo yokuqala, uzinze (Ngaphandle kwee-betas ezithile ezinikezela ngokusetyenziswa kwebhetri ephezulu), ayimangalisi into yokuba iApple ithathe isigqibo sokuphelisa ukubekwa ezantsi kwangoko kunesiqhelo, kuba ixesha eliqhelekileyo lihlala iveki enye.
Amanani okuqala ahambelana Ukwamkelwa kwe-iOS 14 yalatha kwinto eyiyo uhamba ngesantya esihle Sele kunjalo namhlanje, izixhobo ezi-1 ezi-4 ezihambelanayo (ezifanayo nebezihambelana ne-iOS 13) sele zifake i-iOS 14, eyi-10% kunamanani okwamkelwa kwe-iOS 13 kwangelo xesha linye.
Ukubuyela umva kuhlobo lwangaphambili lwe-iOS yeyona ndlela ifanelekileyo kubasebenzisi abakhoyo ukufumana ukungasebenzi kakuhle kwizixhobo zabo. Xa eli thuba lingasekho, ekuphela kwendlela eseleyo kukubuyisela isixhobo ekuqaleni kwaye wenze ufakelo olucocekileyo lwenguqulo yamva nje ekhoyo ngelo xesha ngaphandle kokubuyisela ugcino esinokulugcina, kuba besizokurhuqa iingxaki ukuba besele sihlangabezana nazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 13 » Akusekho kwimeko yokwehla uye kwi-iOS 13.7
molo oku kukugqibela sitsho
Olu luvavanyo lokugqibela
Phendula u-hello oku kugqityiwe
UJohn doe sitsho
Uvavanyo lwezimvo zenqaku
Phendula Jhon doe
Amaphepha, amanani kunye ne-Keynote bafumana iindaba ze-iOS kunye ne-iPadOS 14
I-iFixit idibanisa i-Apple Watch Series 6 entsha